【Izakhiwo Zezimbali】UMickey Minnie Abazali Nezingane｜Mahhala imizuzu eyi-10 ngemoto usuka e-Disneyland｜I-shuttle ekhokhelwayo kanye nesiteshi esingaphansi komhlaba｜Iziqhumane zikhombisa ekamelweni｜Indawo yokupaka yamahhala｜Izidlo zasekuseni ezimbili
Ikamelo e-ikhaya eliyindawo yokuhlala ibungazwe ngu-花筑 · 上海浦东新区茗语阁主题民宿
U-花筑 · 上海浦东新区茗语阁主题民宿 unokuphawula okungu-27 kwezinye izindawo.
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-花筑 · 上海浦东新区茗语阁主题民宿 izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Siyakwamukela Floral Shanghai Pudong okusha Indawo Mingyuge Theme Homestay, sizobe ukwamukela yonke imindeni nge efudumele, efudumele futhi isevisi uqobo. Floral Shanghai Pudong okusha Indawo Mingyuge Theme Homestay itholakala eduze Disney Resort, iqonde line ibanga acishe abe mathathu Amakhilomitha, ezungezwe ngamasimu elayisi, amadolobhana, nemifula, kude nomsindo womhlaba. Isitolo sethu yindlu ezimele. Igumbi lezivakashi ngalinye liklanywe ngokucophelela ngokusekelwe kumfanekiso wezinganekwane zakwaDisney. Ingadi ezimele ifakwe izihlalo zokuphumula kanye ne ebaleni lokudlala zezingane. Emva ukudlala Disney, ungakwazi asonge tea igumbi ukuze isiphuzo itiye wengxoxo, ahlale otshanini afunde incwadi ngendlela Daze, wantonly, ngijabulele ukuphila isikhathi kancane, ifakwe amakamelo ukuhlangana, ungakwazi ukwakha izoso iqembu, ezokungcebeleka ukuphila, ephelezelwa umculo, isiqophi ukulandela, Ukusabalala egcwele engenantambo isignali yenethiwekhi, Ziphethe smart isicabha, umkhiqizo air-conditioning, ukusetshenziswa mahhala emakhishini ohlanganyelwe, imishini yokuwasha, amafriji, njll, eliphezulu zokugeza alahlwayo, nezingubo zokulala kungashintshwa njalo guest. umphathi ungumuntu kuqondile kakhulu futhi funny ozimisele ukwenza abangani uyajabula kakhulu ukuzwana, ngithemba ukuthi isevisi eliphezulu kuyokulethela ehlukile Homestay isipiliyoni. Uma ukhathele umsindo befuna lokuphila edolobheni futhi bafuna ukuzwa uhambo Disney agcwele amantombazane Ungadliwa, khona-ke siyobe lapha ngabomvu umhlangano wena abafisa ukukunika i-Disney ukuvakasha unezela a touch of umbala.
Igumbi lomzali nengane likaMickey Minnie liyigumbi elinetimu ye-anime elinokhiye beminyango abahlakaniphile, lifakwe umbhede oyimitha elingu-1.5 kanye negumbi elilodwa elingamamitha angu-1.2, imibhede yohlobo lwenkanyezi, izinto zangasese ezingeniswa kwamanye amazwe, igumbi lokugezela elihlukene, ukumbozwa kwenethiwekhi engenantambo kuyo yonke indawo. , maphakathi-air-conditioning, amahora amabili nane amanzi ashisayo, omunye esikhundleni ikhasimende ngalinye, futhi nohlanzekile ikhasimende ngalinye, ihlanzekile futhi zikhululekile.
Indlu iseduze ne-Disney Resort eChuansha Town, ePudong New Area. Iqhele ngamakhilomitha amabili ukusuka e-Disneyland. EDolobheni laseChuansha, kunezidlo zasendaweni zase-Shanghai, ukudla okulula kwasendaweni, izitolo ezinkulu, nezinto zokuhamba ezikahle. Cishe amakhilomitha angu-11 kude Safari Park kanye Zhoupu Five angu kude oLwandle Imbali, esitolo anganikeza eseduze pick up bese uphonsa-off service, njll Disney ucosha bese uphonsa off mahhala.
Ibungazwe ngu-花筑 · 上海浦东新区茗语阁主题民宿
I-B&B inikeza insizakalo yamahora angu-24. Ungathintana nomphathi wezitsha edeskini elingaphambili nganoma yini. Kukhona umshayeli webhasi esitolo. Ungathatha futhi wehlise i-Disneyland mahhala, noma ungakwazi ukuyithatha bese uyiyeka. ukuya kwezinye izindawo ngenkokhelo.
I-B&B inikeza insizakalo yamahora angu-24. Ungathintana nomphathi wezitsha edeskini elingaphambili nganoma yini. Kukhona umshayeli webhasi esitolo. Ungathatha futhi wehlise i-Disne…
U花筑 · 上海浦东新区茗语阁主题民宿 Ungumbungazi ovelele